FOKO: Ny Faha 50 Taonan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2017 3:31 GMT
Manakaiky ny faha 50 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany amin'ity taona ity. Ho fanamarihana ny fandrosoan'ny firenena, Patrick avy ao amin'ny Rising Voices izay manohana ny FOKO Madagascar , dia niantsafa tamin'ireo zokiolona roa avy eto Madagasikara momba ny endrik'i Madagasikara rehefa afaka 50 taona taorian'ny fahaleovantenany.
Nitatitra i Imahaka fa manao fanentanana momba ny viriosin'ny H1N1 ny sekoly fianarana asa fanaovan-gazety ESSVA any Antiserabe izay efa hita tamin'ireo olona an-jatony maro avy eto Madagasikara. Mamariparitra ny fomba nandihizan'ireo mpianatra teny ambony lampihazo mba hisarihana ny vahoaka ny lahatsoratra. Nampiasa fampisehoana marionety sy hetsika hafa fanentanana izy ireo mba hanelezana ny teny momba ny fomba hisorohana ny viriosin'ny gripa H1N1. Ity ny sarin'ny ekipan'ny mpianatra nandresy.
Farany ary indrindra indrindra, namoaka lahatsary avy amin'ireo hira fahiny sasany avy eto Madagasikara i Tahina .
Mamakia bebe kokoa avy amin'ny bilaogera FOKO.